ကြက်ဥ fertilization ၏လုပ်ငန်းစဉ်
သင်သိသကဲ့သို့, လူတစ်ဦးသည်ကိုယ်တော်တိုင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၏ဖြစ်စဉ်ကိုသာတခါတစ်လဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာအခိုက်မှာ follicles (မျိုးဥထွက်) မှအခါရင့်ကျက်ကြက်ဥကြီးနှင့်အမျိုးသမီးမျိုးပွားဆဲလ် fertilization ရှိသေး၏။ , ဒီအချိန်မှာအထီးလိင်ဆဲလ်အမျိုးသမီးမျိုးပွားမှုစနစ်အတွက်လက်ရှိဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုသည်မှာအလွန်အရေးကြီးသောကြောင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းမျိုးဥထွက်သည်အထိရှည်လျားမဟုတ်ခဲ့ပေ။
ကိုယ်ပိုင် fertilization ဖြစ်စဉ်ကိုတော်တော်များများအဆင့်ဆင့်ပါဝင်ပါသည်။ ရဲ့ကတစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့် ယူ. တစ်ဦးချင်းစီ၏အဓိကအချက်များကိုမခေါ်ကြပါစို့။
ဘယ်လို fertilization ၏လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သနည်း
ဒါကြောင့်ရာသီစက်ဝန်းရဲ့အလယ်လောက်ကြက်ဥဟာ follicles ထဲကလာပါတယ်။ ဒါကအသားအရေပျော့ပြောင်းကြောင့်ဝမ်းဗိုက်လိုင်သို့ထိုးဖောက်ရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆဲလ်ရင့်ကျက်ကူညီဟော်မုန်းများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုအရပ်မှ, ကြက်ဥက၎င်း၏အမျှင်အနားမှာစီစဉ်ပေးတစ်ချိန်တည်းမှာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အဆိုပါ fallopian tube မှစီးကျလာတယ်။
ထို့နောက်ကြောင့်ကြွက်သား contractile အဆောက်အဦများ၏လှုပ်ရှားမှုများအကြောင်း, ကြက်ဥတဖြည်းဖြည်းသားအိမ်ပြောင်းရွှေ့နေသည်။ အများစုကတော့လူသားများအတွက် fertilization ၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဖြစ်ပေါ် သည့် fallopian tube ။
ဒါဟာအမျိုးသမီးပိုးဆဲလ်တွေဝန်းရံထားတဲ့၎င်း၏သုက်ပိုးတွေအများကြီး "စောင့်ဆိုင်းက" ဒီနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တစ်ဦးစီအတွင်း၌ရဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့်မကြာခဏသာတစ်ဦးတည်းအောင်မြင်နေသည်။
ယင်းသုက်ပိုးများ၏ဦးခေါင်းဖြန့်ချိရာ enzymatic တ္ထုများမှတဆင့် Ovum ပြင် shell ကို၏သမာဓိချိုးဖောက်။ ရလဒ်အပေါက်များနှင့်သုက်ပိုးမှတစ်ဆင့် ထိုးဖောက်မှု။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆဲလ်များ၏ flagellum ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စွန့်ပစ် ကသာရွှေ့ဖို့ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်မည်သည့်မျိုးဗီဇသတင်းအချက်အလက်ဆံ့မခံပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ဟာမြင့်မားတဲ့တိကျစွာနှင့်တကွ, ရာသီစက်ဝန်း၏ရက်ပေါင်းအားဖြင့် fertilization ဖြစ်စဉ်ကိုတွက်ချက်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုပါလျှင်တစ်ဦးတည်ငြိမ်ပြီးပုံမှန်အစည်းအဝေးကာလရှိသည်သောသူတို့သာအမျိုးသမီးများ၏ကြောင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်, သင်သံသရာ၏ကြာချိန် 14 ရက်အတွင်းယူဖို့လိုအပ်ပါတယ် - ဒါဟာအတိအကျမျိုးဥထွက်ပြီးနောက်စတင်သောဒုတိယအဆင့်အဖြစ်ကြာရှည်ခံသည်။
အဆိုပါ fertilization ဖြစ်စဉ်ကိုကြက်ဥဖြစ်ပျက်မဆိုနိမိတ်လက္ခဏာများရှိပါသလား
ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဒီမျိုးကိုမကြာခဏဖြစ်နိုင်သမျှကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၏အစောပိုင်းရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့သည်ချင်တဲ့သူတွေကိုအမြိုးသမီးမြားကိုစိတ်ဝင်စားသည်။ သို့သော်၎င်းတို့၏စိတ်ပျက်လက်ပျက်ငှါ, ကြက်ဥမျိုးအောင်နှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမဟုတ်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
များသောအားဖြင့်ဆိုလိုသည်မှာနှောင့်နှေး menses ရှိခဲ့သည်အခါအချိန်တွင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများရောဂါ လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်2ပတ်ကြာ။
ECO Chi - သင်ကအခမဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်သမျှ
နေ့တာရှည် Eco protocol ကို - အစီအစဉ်
IVF ပြီးနောက် hCG
IVF - ကဖြစ်ပျက်အဖြစ်?
Cryo-IVF protocols များ
ဘယ်လို IVF fertilization သနည်း
ငါ persimmons နှစ်အရွယ်ကလေးကနိုင်သလား?
Souffle ကြက်သား - ပါးစပ်-ရေလောင်းဟင်းလျာများများအတွက်အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
Hepatic fritters အမဲသားအသည်း - ကြော်
Atheroma - ခွဲစိတ်ခြင်းမရှိဘဲကုသမှု
58 နှစ်အရွယ်ငွေကြေးထောက်ပံ့နှင့်အတူခွဲခွာအက်ရှလေ Olsen, သတို့သားအငယ်ကိုတွေ့
ကျွန်တော်တို့ကိုအစွန်းရောက်ဆုံးရှုံးအလေးချိန်အံ့သြသူကို 13 ကြယ်များ
အားကစားမပါဘဲမဟုတ်တစ်နေ့: 72 နှစ်အရွယ် Goldie Hawn ရွရွပြေး
ဗန် Noten ခန်းခြောက်
အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေပုံကိုလျင်မြန်စွာ - လည်ချောင်းယား?
မုန့်သို့မဟုတ်ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်အတွက်ပင်လယ်စာနှင့်အတူခေါက်ဆွဲ - 8 အကောင်းဆုံးအီတလီအစားအစာချက်ပြုတ်နည်းများ